WhatsApp Chat Public Public Chat Isitolo sethu
ngu-HGH Thailand December 04, 2017
Unemibuzo? ukuxhumana namakhasimende wangempela
I-WhatsApp ingxoxo yangempela yamakhasimende
+ 66 946 357 637 (chofoza kuze kube inombolo uhambe ukuxoxa)
I-Genotropin HGH eJapane Ukukhula KwamaHlomu eHokoni
I-1. E-Bangkok, singakwazi ukuletha ukuhlelwa kwe-hormone yakho yokukhula ngaphakathi kwamahora we-3 nokukhokhwa ngemali, kwamanye amadolobha aseThailand isibonelo sokulethwa kwePhuket kuthatha amahora angu-12-24
I-2. Siqinisekisa ukuthi ukuthunyelwa kwamazwe ngamazwe okuphephile ku-Australia, ukuhamba kwamasiko, i-hormone yokukhula ihlinzekwa nge-thermo-packaging okuvikelayo emnyango wendlu yakho noma sizobuyisela imali kuwe
uJan Mashi 30, 2018
I-1 / Ngifuna ukuthenga i-HGH uma ngifika eThailand futhi ngizibuza ukuthi kungenzeka yini ukuhlela ukuqoqa lapho, uma ngifika ???? ngifunda ukubuyekezwa ukuthi umfana udole kumakhemikhali futhi ukhokhe imali futhi ube phakathi kwamahora angu-8,
I-2 / Ngingakholelwa uma ukuhlelwa kwendalo yesimo sezulu ngeke kuthunwe izingubo zokuthenga e-Australia kanye nobuqotho bomkhiqizo ngenxa yombuso onzima.
Mark Mashi 30, 2018
ngiyabonga abafana, ngithole izimpendulo zemibuzo yami yonke
Ithole i-oda lami ngoJanuwari 15th, enelisekile kakhulu ngokuthumela kwakho emhlabeni wonke.